UZuma utshele iKhabhinethi ukuthi akanamuzi eDubai | News24
UZuma utshele iKhabhinethi ukuthi akanamuzi eDubai
Cape Town – UMengameli Jacob Zuma usetshele iKhabhinethi ukuthi akanawo umuzi eDubai.
ISunday Times ishicilele umbiko osola ukuthi ama-emails akamuva aputshukile aqinisekisa ukuthi isithabathaba somuzi obiza u-R330m esathengwa umndeni wakwaGupta ngonyaka ka-2015 sasithengelwe uMengameli Zuma.
Lesi sithabathaba, esisendaweni yomtakabani ewubukhazikhazi e-Emirates Hill, sishaya ngamagumbi okulala angu-10, amagumbi okugezela angu-13, amagumbi angu-9 okwamukela izivakashi, indawo yezimoto ezingu-11 kanye nedamu elikhulu lokubhukuda elinkankwe yizihlahla. Isendaweni eyodwa nendlu kaGrace Mugabe, ongunkosikazi kaMengameli waseZimbabwe, uRobert Mugabe.
OLUNYE UDABA: Sishiye esingalazi ngoZuma isikhulu esiphezulu se-ANC
IKhabhinethi ihlangane ngoLwesithathu, kwathi ngoLwesine ekuseni, uNgqongqoshe wezokuxhumana, u-Ayanda Dlodlo wethule isitatimende seKhabhinethi.
“IKhabhinethi isiqaphele ngokukhulu ukukhathazeka imibiko yabezindaba “ngama-emails aputshukile’ enziwe ngokwamanga ukucaphazela ongqongqoshe, izikhulu kanye nabantu abazimele ezinsolweni zokungenzi kahle,” sifundeka kanjalo isitatimende.
“IKhabhinethi isalokhu izinikele ngokuphelele ekuphatheni okuhle futhi, ngesikhathi esifanayo, iphinde iqaphele ukuthi bonke abantu bathathwa njengabamsulwa kuze kube baqinisekiswe njengabanecala ngokoMthethosisekelo.”
IKhabhinethi ithi iyakuqonda ukuthi kunamacala asevuliwe yabe isinxusa wonke umuntu onolwazi ngezenzo zobubi ezenziwa yizikhulu zikahulumeni ukuba azise abezomthetho.
“UMengameli Jacob Zuma usezichithile izinsolo ezashicilelwa yiphephandaba langesonto ukuthi unomuzi eDubai, e-United Arab Emirates."